Ubuntu mandeha amin'ny Motorola Atrix | Androidsis
Ubuntu mandeha amin'ny Motorola Atrix
Avy amin'ny forum XDA izy ireo dia manome antsika kofehy izay amboarina ny Ubuntu MOD ho an'ny Motorola Atrix. Somary lava sy sarotra ny fomba hamahana ireo Bugs sasany. Tsy misy atolotra ho an'ireo mpampiasa Android tsy manam-pahaizana, ary mazava ho azy, GNU / Linux. Efa ao amin'ny paositra, amin'ny voalohany, izy ireo dia mampitandrina ny amin'ny mety hisian'ny 'biriky' (sakana) izay ny mpampiasa manao fanandramana amin'ny findainy ihany no tompon'andraikitra.
Toa manandrana ianao voavaha manatsara ny olana sasany ananany ao amin'ny ROM:
Hatsarao ny tontolo iainana ao anatin'ny Motorola.
Ampitomboy ny habaka malalaka aorian'ny fametrahana (80mb sisa sisa). Izay mahatonga ny fametrahana programa tsy misy ilana azy.
Mamorona tontolo vaovao mifototra amin'ny GNU / Linux.
Olana sasany amin'ny fametrahana programa, miaraka amin'ny apt-get / aptitude (mora amboarina).
Ny fizotry ny fametrahana dia vita amin'ny alàlan'ny console. Manoro hevitra ny mpamorona mba hampiasa ny LXTerminal ho an'ny fizotrany, na dia afaka mampiasa hafa aza ianao. Tsy maintsy manaraka tsara ireo dingana ianao satria tsy maintsy manova ny zavatra 'mora tohina' ao am-pon'ny Ubuntu. Ilaina ny maka tahaka ny ampahany amin'ny rafitra, mametraka azy ary mametraka azy. Aorian'izay dia ilaina ny mametraka fonosana maromaro toy ny dbus, pulseaudio, udev na xorg. Taorian'ny baiko maro sy ny fivezivezena ny fisie sy ny lahatahiry dia hametraka Ubuntu amin'ny ankapobeny isika. Saingy tsy misy fametrahana programa dia tsy misy ilana azy. Tsy maneho hevitra momba ny fiasan'ny ampahany amin'ny telefaona izy ireo, toy ny feo, bt, na wifi.
Toa tsy ROM miasa 100% izy io, fa manokatra varavarana maro amin'ny fampivoarana ny GNU / Linux tahaka ny an'ny terminal sasany. Toy ny Nokia N900, ny fitondrana fizarana miorina amin'ny Debian na fizarana hafa dia ho tombony amin'ny famolavolana sy fampidirana programa efa misy ho an'ny birao. Raha jerena ny fironan'ny Gadgets, miha mahery vaika kokoa ary mora entina kokoa, angamba ity no fomba vaovao, fitaovana finday, na dia mijanona eo aza ny PC mandritra ny androm-piainany.
Làlana fampandrosoana tsara ve ity? Tsara kokoa ve ny mifantoka amin'ny Honeycomb?
apetraka amin'ny XDA
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Ubuntu mandeha amin'ny Motorola Atrix
Tokony ho 1 taona lasa izay dia nisy tutorial iray hampandehanana ubuntu amin'ny android, izay notsapaiko tamin'ny Milestone 1 nananako, nihazakazaka izany, vao avy nahavita nihoatra ny 900 mhz izy dia nanomboka nilatsaka kely kokoa….
Heveriko fa tsy afaka mahita ny Ubuntu mihazakazaka ao amin'ny milina fanasan-damba fotsiny isika (ary heveriko fa ho avy io andro io). Hahaha.
Nilaza i Toshiba fa ny New Android Tablet dia tsara kokoa noho ny iPad2
Ny orinasa Mexico Kyoto dia mandefa ny takelaka Android-tenany